आजको राशिफल २०७८ साल भाद्र १९ गते शनिबारGandaki Press
वि.सं. २०७८ साल भाद्र १९ गते शनिबार, तदनुसार ई.सं. २०२१ सेप्टेम्बर ४ तारिख, राक्षसनाम संवत्सर, श्रीसूर्यदक्षिणायन, वर्षाऋतु, चान्द्रमान अनुसार भाद्रकृष्णपक्षको द्वादशी तिथि विहान ६:२७ बजेसम्म, त्यसपछि त्रयोदशी रहनेछ ।
मेष : स्वास्थ्य समस्याले सताउनेछ । काम गरेर जस नमिल्दा नैराश्यता छाउनेछ । विपक्षीले कमजोरीको फाइदा उठाउने छन् । आर्थिक अवस्था कमजोर बन्नेछ । नयाँ कार्य थाल्दा मातृ पक्षको साथले थाल्नु होला ।
वृष : साथीभाईसँगको रमाइलो जमघट हुनेछ । जोखिमयुक्त कार्यलाई पनि सरल तरिकाले गर्न सक्दा प्रशंसकहरु बढ्ने छन् । सान्दर्भिक कार्यको आरम्भले गर्दा धेरै व्यक्तिको साथ सहयोग पाइनेछ । हर्षको खबर मिल्नेछ ।
मिथुन : अचल सम्पत्ति जोड्ने योग बनेको छ । आर्थिक अवस्था बलियो रहँदा लगानि गर्न सकिनेछ । द्वितीयेश चन्द्रमाले सामान्य अन्योलको अवस्था सृजना गर्न सक्छ, कुटुम्बको सहयोगले कार्य गर्दा सफल भइनेछ ।